RetroArch Inowana Kusunungurwa pane iyo Steam Client | Linux Vakapindwa muropa
RetroArch Iyo distro yakatarisana nemitambo yekutamba. Izvo zvinopfuura kupfuura emulator, inoenderana nemapuratifomu akawanda kubva kumuchina wekare kuti ienderane neayo ese emitambo yemavhidhiyo yaunoda kutamba zvakare pane yako SBC kana PC. Uye ikozvino inosvika pakuburitswa pane Steam kuti ienderere mberi kunatsiridza kuenderana nemitambo mazita.
Mushure mekuwanikwa pa Steam Playtest Kwechinguva, nhasi kunoratidzira kumisikidzwa kweStam. Parizvino, huwandu hwemakorari (zvinorehwa neRetroArch semaemulator, akagadzirwa kuburikidza nehurongwa hwayo hweplagi) inowanikwa ishoma, asi ichawedzera nekufamba kwenguva uye imwe neimwe ichave iripo seDLC kubva kuSteam.
Zvinotaridza kuti imwe yedzenzira dzavakagadzirisa iyo copyright uye trademark nyaya hakusi kutumidza masisitimu anoteedzera iwo Steam cores. Iwe unozoona kuti ivo havana kutumidzwa mazita zvakananga mune chero eanogona kurodha pasi emapeji mapeji, asi izvo hazvidzikise kubva mukushanda kwayo, ingori nzira yekudzora mutemo kuti udzivise kumhan'ara.
Kana iwe uchinetseka nezve emulators kana tsanga dziripo parizvino kurodha pane Steam seDLC (Ndinoyeuka kuti zvimwe zvichaonekwa munguva pfupi) ndeizvi:
Yekupedzisira Kupisa Neo: multarcade muchina emulator
Genesis Plus GX - Sega Genesis / Mega Dhiraivha, Sega / Mega CD, Master System, Game Gear, SG-1000 uye Pico
mGBA - Yepamberi GameBoy
SameBoy - Game Mukomana, Game Mukomana Ruvara uye Super Game Mukomana
Mupen64Plus-Inotevera - Nintendo 64
PCSX YAKADZIDZWA - PlayStation
Kana Valve yaburitswa Steam dhizaini, izvi zvichabatsira kuti uite musina kusarudzika muchina sezvaunogona kufungidzira. Yazvino uye echinyakare mitambo pane inotakurika koni ... Zvichava chaizvo incredible.
Unogona kuwana uye kurodha izvozvi kune zvirimo kubva apa hwemvura chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » RetroArch inowana kuvhurwa pane iyo Steam mutengi
Linux 5.15: huru kernel kuburitswa kwe AMD uye Apple M1